Mhlawumbe Isikhathi Sokucabangisisa Isu Lakho Lapho ... | Martech Zone
Mhlawumbe Isikhathi Sokucabangisisa Isu Lakho Lapho…
ULwesihlanu, May 30, 2008 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 Douglas Karr
Uma ngabe uzoba nekhono lesisombululo sakho sokwengeza ukuthengisa - mhlawumbe akuyona indlela. Ngithumele isiza kumngane wami Jason, futhi wathola lesi sifundo esikhulu samacala amancane indlela yokudlela ephushe ngayo intengo yabo engu-1/2 ekhethekile futhi cishe ukuphindwe kabili ukuthengisa kwabo.
Mangaki Amaposi Ebhulogi?
I-Wildcard DNS kanye ne-Dynamic Subdomains
UJun 1, 2008 ngo-2: 59 AM
Umbuzo uwukuthi, bakuphindile yini ukuthengisa kwabo ku amayunithi noma ku dollars? Angizukuphinda-ke lokhu ...
UJun 1, 2008 ngo-9: 53 AM
Akungabazeki ukuthi kube nomphumela othile lapho ikhasimende lijabule ngokwanele ngalo ukusiza ukusiza ukubhala iphepha elimhlophe. Kumane kuyisinqumo esingajwayelekile ukubeka njengo 'Umphumela Webhizinisi'.
Ukuqagela kwami ​​ukuthi babenentengo yentengo ye-1/2 ku abanye imikhiqizo, mhlawumbe ama-appetizers abo, bese baphinda-ke kabili ukuthengisa kwabo jikelele ngekhasimende ngalinye kuma-entrees.
UJun 1, 2008 ngo-8: 42 AM
Kungani ume ngentengo engu-1/2? Babengabeka izinto ngentengo engu-1/4 baphinde bakuthengise kabili!
UJun 1, 2008 ngo-9: 54 AM
Yilokho ebengikucabanga! 🙂
UJun 2, 2008 ngo-8: 39 AM
Kungikhumbuza indaba - angazi noma iyiqiniso noma cha - ngomfana ophindaphinde ukuthengisa umuthi wamazinyo ngokukhulisa usayizi womgodi oshubhu.